Yakawanda sei Whisky yakanaka? Zvakadii nezve $ 60,000 yeSuntory
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Yakawanda sei Whisky yakanaka? Zvakadii nezve $ 60,000 yeSuntory
Yamazaki 55 yave kuwanikwa kuGlobal Travel Retail
Imba yeSuntory nhasi yaunza huwandu hushoma hweiyo yakaganhurwa-shanduro yeYamazaki 55 whisky kuGlobal Travel Retail, inowanikwa nemutengo unokurudzirwa wemadhora makumi matanhatu emadhora.
Yakavharirwa muna2020, Yamazaki 55 ndiyo imba yeSuntory yakaburitswa kare munhoroondo yayo uye inopa mutero kumhuri yekutanga yewhiskey yeJapan, ichipemberera nguva yeJapan "Showa" yema1960.
Yamazaki 55 ichave iripo kusarudza Global Travel Retail nemabhodhoro anowanikwa muLondon, Paris, Hainan, Hong Kong, Taipei, Amsterdam, Seoul, Delhi, Istanbul, Dubai neSingapore.
Beam Suntory ichapa $5,000 USD pabhodhoro rega rega rakaburitswa muunganidzwa we100-bhodhoro wegore rino, inosvika $500,000 USD, kuThe White Oak Initiative, boka rakazvipira kusimudzira kwenguva refu kwemasango emuoki machena eAmerica.
Yamazaki 55 musanganiswa wemareta akakosha, ane zvikamu zvakanyungudutswa muna 1960 achitariswa nemuvambi weSuntory Shinjiro Torii uye akazochembera muMizunara makasi; uye muna 1964 vachitungamirirwa naSuntory's Second Master Blender Keizo Saji uye akazochembera mumabhokisi eWhite Oak.
Suntory's Fifth-Generation Chief Blender Shinji Fukuyo akashanda padhuze neTatu-Generation Master Blender Shingo Torii kutumira siginecha yavo art yekusanganisa kunyatso ratidza hudzamu hunoshamisa, kuomarara uye hungwaru hunova Yamazaki 55.
Mvura inoguma inoratidzira yakadzika amber ruvara; kunhuhwirira kwakasimba kwakatsvuka kweshangu uye michero yakaibva zvakanaka; zvinotapira, zvishoma zvinovava uye zvehuni palate; uye inovava zvishoma asi inotapira uye yakapfuma kupera.
Manuel González, Marketing Director GTR yeBeam Suntory, akati: "Tinodada zvikuru nekuva nemukana wekupa vafambi chimwe chinhu chakasiyana uye chakasarudzika saYamazaki 55, kutaura kwechembere kubva kuImba yeSuntory. Ichi chigadzirwa chakanyanya kushomeka-chicharatidzwa mune dzimwe nzvimbo dzedu dzakanakisa dzeImba yeSuntory, uye ichawedzerwa nemushandirapamwe wekuita. Takazvipira kukura Global Travel Retail nekusimbisa kupa kwedu kwekutanga uye kuunza yakanakisa premium shopper ruzivo kuhupenyu kune vatengi vedu. "
'Yamazaki' yakanyorwa mucalligraphy pabhodhoro rega rega rekristaro, nepo zera rekumaka richinamirwa neguruva regoridhe uye rakachengetedzwa nelacquer. Kuvhurwa kwebhodhoro kwakaputirwa nebepa rakagadzirwa nemaoko Echizen washi uye rinosungwa neKyo-kumihimo yakarukwa tambo, hunyanzvi hwechinyakare kubva kuKyoto. Bhodhoro rega rega rakavharirwa mubhokisi rebespoke rakagadzirwa neJapan Mizunara huni uye rakaputirwa neSuruga lacquer.